तपाईंकी श्रीमती यो होटलमा गर्भवती भए पाउनुहुनेछ १ करोड १२ लाख इनाम ! » Khulla Sanchar
तपाईंकी श्रीमती यो होटलमा गर्भवती भए पाउनुहुनेछ १ करोड १२ लाख इनाम !
यदि तपाईंको नयाँ–नयाँ विवाह भएको छ र हनिमुनमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईंको लागि खुसीको खबर छ । एक होटलको अफर थाहा पाएर अचम्मित हुनुहुनेछ तपाईं । हनिमूनको क्रममा यदि तपाईंकी श्रीमती यो होटलमा गर्भवती हुन्छिन् भने तपाईंले १ करोड १२ लाख इनाम पाउनुहुनेछ ।
यस्तो अचम्मको अफर दिने होटल इजराइलमा छ । येह्दा नामक उक्त होटलमा आउने ग्राहकहरुका लागि यस्तो अफर दिइएको हो । तपाईंमध्ये कतिले त यस्तो मोटो रकम पाइने भए, लामो छुट्टी लिएरै होटलमा बस्न जाने सोचिसक्नुभयो होला तर यति रकम पाउन सोचेजति सजिलो कहाँ छ र ?
यसका लागि होटेलले दिएको मितिमा नै गर्भवती हुनुपर्ने हुन्छ । यदि होटेलले तोकेको मितिमा नै कुनै महिला गर्भवती हुन्छिन् भने उनलाई करिब १ करोड १२ लाख उपहार दिइन्छ भने उनी र उनका श्रीमानको होटलको सबै खर्च कटौती गरिन्छ ।
४ वर्षमा एकपटक मात्रः
यस्तो अफरको आयोजना होटलको लिप इयर अर्थात ४ वर्षमा एक पटक मात्र गरिन्छ । होटलको यस्तो अफरको उपभोग गर्नका लागि थुप्रै जोडीहरु २९ फेब्रुअरीका दिन आएर बस्ने गर्दछन् ।
यदि महिलाले आफू उक्त समयमा नै गर्भवती भएको दाबी गर्छिन् भने होटल भित्रकै डाक्टरका टिमले जाँच गरेपछि आफ्नो निर्णय सुनाउने गर्दछन् । यदि महिलाको कुरा साँचो निस्केमा उनलाई कबूल बमोजिम रकम र उपहार प्रदान गरिन्छ ।